ALinks - Pejy 73 - fitsangatsanganana sy fiainana any ivelany ho an'ny rehetra
ALinks, Rohy ivelany, fitsangatsanganana ary fiainana any ivelany ho an'ny rehetra
Vaovao sy torolàlana maimaimpoana momba ny fitsangatsanganana sy ny fiainana any ivelany. Mandehandeha, mifalifaly, mitsidika na miantsena manodidina. Mifindra, mividy zavatra ilainao, mianatra, miasa, mandeha mianatra, na mahazo fitsaboana. Ireo lahatsoratra tsy miankina ireo dia natao ho an'ny tsirairay avy amin'ny firenena rehetra. Miresaka amin'ny fiteny maro amin'ny firenena mihoatra ny telopolo manerantany izahay. Tongasoa ireo mpitsoa-ponenana!
Enga anie 15, 2019 Maitri Jha asa, Oganda
Fianarana any Uganda !!
Enga anie 15, 2019 Maitri Jha fianarana, Oganda
Vonona ny hianatra any Oganda ve ianao ?? Toerana tsara hianarana ho mpianatra vahiny. Noho ny 700 eo ho eo, mpianatra amerikana mianatra isan-taona any Oganda. Letus mahalala bebe kokoa momba an'i Oganda: Fantatra amin'ny fomba ofisialy i Oganda
Oniversite any Pakistan
Enga anie 8, 2019 Karuna Chandna Pakistan, fianarana
Enga anie 7, 2019 Karuna Chandna asa, Emira Arabo Mitambatra
Mikasa ny hifindra any amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) ianao ary noho izany dia mitady asa. Ny asa malaza indrindra dia ny fitrandrahana angon-drakitra, ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny famolavolana tranonkala ary ny famolavolana ny User Interface (UI). Ka raha azonao antoka fa miasa
Aprily 29, 2019 Shubham Sharma Italia, mpitsoa-ponenana
Raha te hitady fialokalofana na fiarovana iraisam-pirenena any Italia ianao dia manampy anao ity lahatsoratra ity. Nanazava ny dingana ilaina sy ny toerana hanaovana fangatahana fialokalofana izahay. Ary farany, nanome rohy mahasoa sasany izahay. Aiza
Aprily 17, 2019 Maitri Jha fahasalamana, India
Aprily 17, 2019 Karuna Chandna India, visa ho
Aprily 12, 2019 Karuna Chandna Meksika, ny vola
Nifindra monina tany Mexico vao haingana !!, na ho an'ny fianarana izany na ho an'ny asa aman-draharaha, dia mety ho nahita kaonty amin'ny banky angamba ianao. Raha izany dia ho fantatrao daholo ny momba ny banky niantsorantsika an'i Mexico sy napetrakay
Aprily 1, 2019 Maitri Jha Germany, trano fandraisam-bahiny
Alemà ny fon'i Eropa dia firenena fahafito lehibe indrindra any Eropa. Berlin no renivohitry ny firenena ary misy mponina miisa 83 tapitrisa ao amin'ilay firenena. Ny Alemana dia malaza amin'ny alàlan'ny Oktoberfest, marika fiara, baolina kitra ary maro hafa